कस्को इशारामा चल्दैछन प्रधानमन्त्री देउवा ? पाँचौ पटक निर्वाचनको मिति सार्ने भित्रभित्रै तयारी – YesKathmandu.com
सोमबार २९, जेठ २०७४
राजपाका नेताहरुले लगाएको गुन तिर्न प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनको मिति सार्ने भित्रि तयारी थालेका छन । राजपाका नेताहरुलाई मनाउने नाममा सरकारले पाँचौं पटक स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्ने तयारी गरेको छ । यस अगाडि राजपाकै नेताहरुलाई खुसी पार्ने बाहनामा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन चार पटक सारिसकेको छ । घोषित वैशाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजपाकै नेताहरुलाई खुसी पार्ने बाहनमा जेठ ३१,असार ९ हुँदै असार १४ मा सारिएको थियो । राजपालाई चुनावमा ल्याउने बाहनामा चार पटक चुनाव मिति सारिसकेको सरकारले पाँचौं पटक पनि असार १४ गतेका लागि तोकिएको चुनाब मिति सार्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनावको मिति पाँचौं पटक सार्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्न सकिने आश्वासन राजपाका नेताहरुलाई दिएका छन । उनले आफ्नो भनाईमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै त्यसका लागि प्रदेश २ मा कांग्रेसले उम्मेदवार नै तय नगर्नेसम्म वताएको कांग्रेसका नेताले बताएका छन । देउवाले राजपाका नेताहरुलाई प्रदेश २ को चुनाव तेस्रो चरणमा गर्न सकिने वताएपछि राजपाका नेताहरुले प्रदेश ५ मा पनि चुनाव स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।
भित्रभित्रै यस्तो तयारी भइरहेको खुलाशा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका छन । उनले सामाजिक सञ्जालमा मा आशंका व्यक्त गर्दै लेखेका छन‘प्रदेश नम्बर २ र ५ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको मिति सार्ने कतै कसैको सहमति अनुरुप भएको होइन होला भन्ने आश गरौं ।
यता यस्कै उपज हो,उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारको पछिल्लो अभिव्यक्ति हिजो विराटनगर पुगेका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रदेश नम्बर २ को चुनाव तेस्रो चरणका लागि सार्न सकिने अभिब्यक्ति दिएका थिए ।
यता प्रधानमन्त्री देउवाले भने चुनाव सार्ने विषयमा छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्पर्क गर्न खोजिरहेका भए पनि ओलीले समय नदिँदा प्रधानमन्त्री देउवा अलमलमा छन ।
सर्वाेच्च अदालतले जारी गर्यो यस्तो कडा उर्दी
विमलेन्द्र निधि र पूर्णबहादुर खड्का भावी नेतृत्वको पर्खाइमा
प्रहरीबाटै बलात्कारपछि महिलाको वर्वरतापूर्ण हत्या
राष्ट्रपति ओबामाद्वारा शुभकामना
जोडले कराएँ, मर्ने त मरेर गईगए, म बाँचेकीलाई बचाइदिनुहोस्
प्राकृतिक प्रकोपबाट एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
प्रहरी गाउँ पस्दा भालेबासका महिला भाग्छन्
अवरुद्ध नेपाल–भारत सीमानाकामा सेना परिचालनको तयारी
प्रचण्डका सल्लाहकारलाई शेखर कोइरालाले कांग्रेस बनाइदिए
मधेसी मोर्चाले गर्यो अर्काे ‘घातक’निर्णय
पद, प्रतिष्ठा र प्रशंसाभन्दा देशभक्ति चाहेको छु : पूर्वराजा
दूतावासद्वारा कल्याणकारी कोषको करोडौँ रकम दुरुपयोग
रहेनन् पूर्वसभासद डा बाबुराम पोखरेल
गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको चेतावनीः अपराधीलाई उन्मुक्ति दिँदा प्रहरीको मनोबल कहाँ पुग्छ ?
भाजपाद्धारा मतदान अधिकृत बलपूर्वक नियन्त्रणमा